UK oo wafdi xildhibaano ah oo xaqiiqo raadin ah u dirtay Google iyo Twitter - BBC News Somali
UK oo wafdi xildhibaano ah oo xaqiiqo raadin ah u dirtay Google iyo Twitter
Ujeedka ayaa waxa uu yahay in ay wax ka ogaadaan wararka been abuurka ah ee kusoo batay baraha bulshada iyo qalabka internet-ka, gaar ahaan farogalinta la sheegay in Ruushka ay ku samaynayaan doorashooyinka dimoqoraadiga ah ee dalalka reer Galbeedka ka dhaca.
Trump oo tiray qaar ka mid ah fariimihiisa Twitter-ka
Barta Twitter-ka wasiirka arrimaha dibadda Baxrayn oo la jabsaday
Maxay tahay sababta aan loo joojineyn "handadaadaha" Trump?
Waxay noqonaysaa markii koowaad oo xildhibaano UK ay meel ka baxsan dalkaas ku sameeyaan dhagaysi dadweyne oo si toos ah loo baahinayo.
Waxaa guddiga hor madaxweyne ku xigeenka Google Richard Gingras iyo Juniper Downs oo ah madaxa xiriirka dadweynaha ee YouTube.
Dadka kale ee guddiga hortiisa qiraalka ka bixinaya waxaa ka mid ah madaxweyne CNN Tony Maddox, iyo agaasimaha wargeyska New York Times, waxayna ka hadlayaan saamaynta uu warbaahinta ku yeeshay wararka been abuurka ah ee lagu baahiyo baraha bulshada.